भिडियोमा हेर्नुहोस्-अध्यक्षका उम्मेदवार आचार्यको प्रतिबद्धताः ‘महासंघलाई राजनीतिक प्रभावरहित बनाउँछु’
‘पत्रकारीता क्षेत्रका सबै समस्या समाधानमा पहल गर्ने’
प्रकासित मिति : २०७४ भाद्र १, बिहीबार प्रकासित समय : ०८:३३
(नेपाल पत्रकार महासंघको भदौं ४–६ गते हुने २५ औं महाधिवेशनमा प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर लगायतका अन्य साना संगठनहरुको तर्फबाट साझा उम्मेदवारका रुपमा गोविन्द आचार्यको चर्चा रहेको छ। अध्यक्षका उम्मेदवार पत्रकार आचार्यले आफुले महासंघको नेतृत्व गर्दा पत्रकारका पेसागत हक, हित र अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ भन्ने सबैलाई विश्वास भएका कारण चुनावी मैदानमा उत्रिएको बताएका छन। पत्रकारीता र पत्रकारको समस्याबारे जानकार पत्रकार आचार्यले यसअघि पत्रकार महासंघ केन्द्रीय उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । उनले श्रमजीवी पत्रकारका लागि बनेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत कुसलतापूर्वक निर्वाह गरिसकेका छन । त्यस्तै श्रमजीवी पत्रकार नियमावली, सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, नयाँ आमसञ्चार नीति निर्माण, समानुपातिक विज्ञापन नीति र छापामाध्यमका समस्या समाधानका काममा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन । आर्चाय अध्यक्ष पदका लागि योग्य र सक्षम देखिन्छन तर निर्वाचनको परिणाम कस्तो आउँछ त्यो भने निर्वाचन परिणाम पछि नै थाहा हुने छ । हरपल नेपाल डटकमले महासंघमा उनको उम्मेदवारीका विषयमा केन्द्रीत रहेर कुराकानी गरेको छ, हामी महासंघको उम्मेदवारीको चर्चामा रहेका अन्य पात्रहरुसँग पनि यसैगरी कुराकानी गर्नेछौ । अहिलेलाई भने प्रस्तुत छ आर्चायसँगको कुराकानी…)
पत्रकार महासंघको महाधिवेशन नजिकिएको छ, अध्यक्षको उम्मेदवारको रुपमा तपाईको चर्चा सुनिन्छ । अध्यक्षमा पदमा तपाईको उम्मेदवारी किन ?
–मैले आज भन्दा ९ वर्ष अघि पत्रकार महासंघको उपाध्यक्षको रुपमा काम गरीसकेको छु र म अहिले २ वटा प्रमुख संस्था लगाएत विभिन्न समूहबाट अध्यक्षको साझा उम्मेदवार भएको छु । मैले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको समस्या, व्यवसायिक पत्रकारिताको समस्या र श्रमजीवि पत्रकारहरुको हक, हितका निम्ति त्यहाँ बसेर संघर्ष, समाधान गर्नुपर्ने भएको कारण काम गर्नका लागि अध्यक्षको उम्मेदवार भएको हुँ ।
पहिले साँझा उम्मेदवार खोज्ने कुरा चर्चामा आएको थियो, त्यो पर्यत्न भएन ?
-नेपालमा सबैभन्दा पत्रकारितामा जेठो र सबैभन्दा ठूलो संगठन प्रेस युनियन, त्यसपछि आएर प्रेस सेन्टर नेपाल, लगाएत विभिन्न अरु समूहहरुको साँझा उम्मेदवारको रुपमा म अध्यक्षमा आएको छु । नेपाल पत्रकार महासंघ सबैको साझा र छाता संगठन भएको नाताले अहिले म साँझा उम्मेदवारकै रुपमा अगाडि बढिरहेको छु ।
तपाईहरु अहिले २,३ वटा संगठनको एलाइन्सबाट चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ, उम्मेदवारी बारे पदिय भागबन्डा के कस्तो भयो ?
-पद भन्दा पनि हामी सबै, तीन वटा संगठन लगाएत अन्य संघ संगठन हुनुहुन्छ । यहाँनिर कुन भाग कस्लाई पर्यो भन्दा पनि सबै साँझा हो, हामी सबै साझा हौँ, यो भन्दा पहिला जुन संघ संगठनमा काम गरेपनि अहिले हामी संगठनबाट अलग भएर साझा उम्मेदवारका रुपमा पत्रकार महासंघको विधान, नीति र मुल्य मान्यतालाई मानेर हामी चाहि साझा उम्मेदवारका रुपमा आएका छौँ । सबै प्यानल नै साझा हो, सङ्गिो टिमलाई जिताउन हाम्रा पत्रकार साथिहरुले सहयोग गरिरहेका छन । संगठनहरुबीच अन्य पद र उम्मेदवारीको विषयमा टुङ्ग्याउन बाँकी नै छ ।
महासंघमा पुगेपछि तपाइको टिमले नयाँ काम के गर्छ ? तपाईको एजेण्डाहरु के छन ?
-मलाई के लाग्छ भने पत्रकार महासंघ अविछिन्न उत्तोराधिकारवाला संस्था हो । पुरानो नेतृत्वले गरेका राम्रो कामहरुलाई हामी अघि बढाउँछौँ । हामी गैसकेपछि पत्रकारीताको क्षेत्रका पेशागत अधिकारका कुराहरु, पत्रकार हक, हितका कुराहरु, त्यस्तै गरी पत्रकारीता व्यावसायिक सम्बन्धी कुराहरु, श्रमजीविहरुका सम्पूर्ण मद्दाहरु र साना मोफसलका मिडियाहरुदेखि सिङ्गो नेपालको मिडिया क्षेत्रलाई राष्ट्रिय सेवा मुलक उद्योगको रुपमा विकास गर्नमा हामी लाग्छौँ । सिङ्गो सञ्चार क्षेत्रमा पुनर्संचना, पत्रकार महासंघको पुनर्संचनाको दायित्वसहित विकास गर्नतर्फ हामी लाग्छौ । अन्तयमा म के भन्न चाहन्छु भने पत्रकारीता क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याहरुलाई हामी पत्रकार महासंघबाटै सम्बोधन गर्न, नागरिक आवाजहरुलाई पनि त्यहाँबाट प्रष्फुटन गर्न, देशको पक्षमा उठाउने त्यस्तै गरी देश र जनताको आवाजलाई बुलन्द पार्ने र त्यो दायित्वलाई हामीले गम्भिर रुपमा लिने छौँ ।
देशभरी छरिएर रहेका विभिन्न राजनीतिक दल निकटका पत्रकारहरु हुनुहुन्छ, कोहि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ सबैले गोविन्द आचार्यको उम्मेदवारी सुन्नु भएको छ, अब चुनाव जित्नका लागि मत माग्नु पर्ने अवस्था आयो, कसरी माग्नु हुन्छ ?
-हैन मलाई सबै साथिहरुले राम्रोसँग चिन्नु भएको छ, म विगत २५ वर्षदेखि पत्रकारितमा लागिरहेको छु र पत्रकार महासंघको उपाध्यक्ष भैसकेको छु । त्यसैगरी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने संस्थाको अध्यक्ष भएर काम गरिसकेको छु । जनसाप्ताहिकको सम्पादक, विभिन्न मिडियाहरुमा लामो समयसम्म काम गरेको अनुभव छ । नेपालको सञ्चार नीति बनाउनेदेखि लिएर धेरै अनुभव बटुल्दै प्रेस काउन्सिलको सदस्य समेत भएको हुनाले मलाई पत्रकारीता क्षेत्रको समस्या के हो ? यसको समाधान कसरी हुन्छ, भन्ने विषय राम्रोसँग बुझेको छु र पत्रकार महासंघ भनेको हामी सबैको साँझा छाता संगठन हो । त्यो संस्थालाई साँझा चरित्रको नै बनाउनु पर्छ । एउटा पत्रकारहरुको हक, हित र अधिकारका निम्ति त्यो सधै अघि बढ्ने संस्था भएकाले म त्यसमा हृदयदेखि नै लागि पर्ने छु ।
भनेपछि सबै पत्रकार साथिहरुले यसरी बुझ्दा हुन्छ पत्रकार महासंघलाई तपाईको नेतृत्वले साँझा संस्थाको रुपमा विकास गर्नेछ, तपाई राजनीतिक हिसाबले कहि कतै त्यस्तो संकेत देखाउनुहुने छैन ?
-यसमा कुनै राजनीतिक संकेत पनि देखिन्न । मैले जितिसकेपछि कुनै पनि राजनीतिक गन्ध आउने, टिकाटिप्पणी पनि आउन दिने छैन । सबैलाई यहि भन्न चाहन्छु ।
त्यसो भए हामीलाई हेरेर बस्ने दर्शकहरुले यहि कुरा बुझ्दा हुन्छ, तपाई अध्यक्ष भै सकेपछि राजनीतिक प्रभाव महासंघमा देखिने छैन ?
-हो, मैले जितिसकेपछि महाँसंघको नीति, नियम र पद्धती अनुसार नै सबै कामहरु हुनेछन, त्यहाँ कुनै खालको राजनीतिक प्रभाव देखिने छैन । मेरो आस्था आफ्नो ठाउँमा होला, विचार आफ्नो ठाउँमा होला तर म पत्रकार महासंघको चाहि साँझा नेतृत्वको रुपमा काम गर्ने छु । महासंघको निर्णय त्यसको विधान, मुल्य मान्यता अनुसार काम गर्छु र मेरा अभिव्यक्तिहरु पनि सोहि अनुसार हुनेछन ।